अन्तिम स्पर्धाको तयारीमा जुटे ‘मिष्टर नेपाल २०१८’का प्रतियोगीहरु ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
अन्तिम स्पर्धाको तयारीमा जुटे ‘मिष्टर नेपाल २०१८’का प्रतियोगीहरु !
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५, बिहीबार
काठमाडौं – ‘मिष्टर नेपाल २०१८’का प्रतियोगीहरु अन्तिम स्पर्धाको तयारीमा जुटेका छन् । देशका प्रमुख शहर काठमाडौ, पोखरा, बिराटनगर, चितवन, धरानलगायतका शहरमा आयोजित पहिलो चरणको अडिसनबाट छानिएका १८ युवा यहि १३ गते हुने अन्तिम स्प्रर्धाका लागि बन्द प्रशिक्षणमा जुटेका हुन् ।
कोरियोग्राफर रोजिन शाक्य, दिक्पाल कार्की लगायतका प्रशिक्षकले उनीहरुलाई प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । प्रशिक्षणका क्रममा उनीहरुलाई स्वमिङ, फुटबल, रक क्लाइसम्बङग, समाजसेवा,सर्ट हाइकिङग, क्याटवाक, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पिकिङग, गुरमिङग, मेकअप, ड्रेसवेयर जस्ता विषयमा दक्ष व्यक्तित्वहरुद्धारा प्रशिक्षण भइरहेको आयोजक एक्सपोज नेपाल डटकमकी सिइयो अर्चना थापाले बताइन् । उनले प्रतियोगीताको अन्तिम तयारी समेत पुरा भएको जानकारी दिएकी छन् ।
सुमन र विद्याको ‘झुम्का’ मा पुष्प र एलिशा
मेलिना राई र बिवश बस्नेतको ‘पिरतीमा कर’
मिन गुरुङ र बिना भट्टराईको ‘बुढेशकालको लौरी’ मा हैट र फुलन्देकी आमा